UlaşımPark Şoförleri İşte Burada Eğitiliyor | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliHerePark ယာဉ်မောင်းများကိုဤနေရာတွင်လေ့ကျင့်ထားသည်
16 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ဒီမှာ ulasimpark ပျော့ပြောင်းပြီးလေ့ကျင့်လျက်ရှိသည်
Marmara ၏မြူနီစီပယ်၏ပြည်ထောင်စုနှင့် Kocaeli မြို့တော်ဝန် Assoc ။ ဒေါက်တာ 2013 မှစ၍ Tahir Büyükakınသည်မြူနီစီပယ်နှစ်ထောင်ငါးရာနီးပါးနှင့် TransportPark ယာဉ်မောင်းများအားသင်တန်းပို့ချသည့်ဘတ်စ်ကား Simulator သင်တန်းများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ Büyükကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားများအားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများမှလုံခြုံစိတ်ချရသောငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်းဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေရန်အတွက်ပညာရေးကိုအလေးထားပါသည်Başkanကမြို့တော်ဝန်Büyükakınအားပြောကြားခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန်Büyükakınက“ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးမည်ဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုစင်တာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်အရွယ်နှင့်မြို့တော်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုအသိဉာဏ်ရှိအချက်ပြစနစ်ဖြင့်တုံ့ပြန်နိုင်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
မြို့တော်ဝန်Büyükakınသည်ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တွင်အများပိုင်ဘတ်စ်ကား၊ တက္ကစီ၊ လွန်း၊ စည်ပင်သာယာဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများအတွက် Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာဌာနသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှု၏ယာဉ်မောင်းသင်တန်းအစီအစဉ်၏အရေးကြီးပုံကိုပြောကြားခဲ့သည်။ နှင့်ယာဉ်မောင်းများနှင့်မသန်စွမ်းခရီးသည်များအကြားကျန်းမာဆက်သွယ်ရေး။ ဒီသင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့လေ့ကျင့်မှုတိုင်းမှာအလေးထားပါတယ်။
အခြေခံကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဆိုင်ရာရောဂါများ၊ မီးဘေးနှင့်မီးငြိမ်းသတ်ခြင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်သီအိုရီအရသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိသောယာဉ်မောင်းများနှင့်အတူမျှဝေခဲ့သောBüyükakın, ယာဉ်မောင်းများသည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ယာဉ်စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းသူကပြောကြားသည်။ မြို့တော်ဝန်Büyükakınမှအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းများသည် 2007 မှစတင်၍ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်မှုပုံစံနှင့်အညီအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းသင်တန်းများပေးခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ယာဉ်မောင်းချိန်တွင်ယာဉ်မောင်းများ၏အမှားများကိုလျှော့ချရန်နှင့်ယာဉ်တိုက်မှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်စီးပွားရေးအရမောင်းနှင်မှုအခြေအနေများကိုလျော့ချရန်အတွက်ဘတ်စ်ကား Simulator သင်တန်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတBüyükakın၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပြုပြင်ရေးစင်တာများမှလေ့လာခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းပေးခဲ့သည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမျိုးသားလျှပ်စစ်ရထားသတ်မှတ်မည်စီမံကိန်းခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား Dampers Bogie, Bogie ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား Dampers စားသုံးမှု (TÜVASAŞ) 08 / 05 / 2017 TÜVASAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှု National Electric Train Set စီမံကိန်း Bogie ဆိုင်းထိန်းစနစ် Shock Absorbers၊ Bogie ခေတ္တရပ်နားခြင်း Shock Absorbers ၏ ၀ ယ်ယူခြင်း JCC မှတ်ပုံတင်နံပါတ် - 2017 / 222904 တင်ဒါနှင့်တင်ဒါနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာများအကြောင်းအရာ။
ထိုသို့သော (ဗီဒီယို) အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် whatman ပညာတတ်ဖြစ်ပါတယ် 24 / 12 / 2014 မစ္စ Vatmanlar အားဤနည်းအတိုင်းပညာပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆမ်ဆန်တွင်သန်းချီသောပေါင်သန်းချီသောလိုင်းများကိုအသုံးပြုမည့်မျိုးချစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်စိန်ခေါ်မှုရှိသောလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းနေရသည်။ ဆမ်ဆန်ပြည်နယ်အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်အကိုင်ဌာနနှင့်SAMULAŞyüzdeလက်မှတ်ရေးထိုးသည့်စာချုပ်အရ
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် Dedirten ခဲ့ulaşımparkကားမောင်းသမားသေဆုံးသွားခဲ့ပါသည် 24 / 01 / 2019 Kocaeli Metropolitan Municipality TransportationPark A.Ş. ၏ဘတ်စ်ကားမောင်းသူ Celil Tuna သည်ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်သူအသုံးပြုသောပိုက်ဆံအိတ်ကိုကျောင်းသို့အပ်နှံပြီးပိုင်ရှင်ထံအပ်လိုက်သည်။ Sabiha Gökçenသို့ Nzmit သို့ 250 သို့ဘတ်စကားလိုင်း။
ulaşımpark Helal Olsun ဘတ်စ်ကားမောင်းသူ Dedirten အပြုအမူ 27 / 01 / 2019 Kocaeli Metropolitan Municipality TransportationPark A.Ş. ၏ယာဉ်မောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သူ Engin Bekçiသည် 12 နှစ်အရွယ်Rümeysa A. ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးသူသည်ဆေးရုံသို့အသွားတွင်ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်ရုတ်တရက်အားကုန်သွားသည်။ အဖြစ်အပျက်အပြီးတွင် Caretaker မှပြောကြားခဲ့သည်။ cular ခရီးသည်တစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်၏ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်ဖျားနာနေကြောင်း…
မိမိအကားမောင်းသူulaşımparkကြီးထွားလာဆေးရုံသတိလစ်ခရီးသည်ခဲ့သည် 22 / 09 / 2019 Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာ၊ TransportationPark ၏တွဲဖက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် A.Ş. ဘတ်စ်ကားမောင်းသူ Emrah Acar (30) သည်ယာဉ်မှူးအားလမ်းကြောင်းမှေးမှိန်သွားစေပြီးဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ 112 နှင့်သူ၏အထက်လူကြီးများကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်ခဲ့သူ Acar သည်သတိလစ်နေသော Yolcu ကိုပထမဆုံးဖြတ်သန်းခဲ့သည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမျိုးသားလျှပ်စစ်ရထားသတ်မှတ်မည်စီမံကိန်းခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား Dampers Bogie, Bogie ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား Dampers စားသုံးမှု (TÜVASAŞ)
ထိုသို့သော (ဗီဒီယို) အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် whatman ပညာတတ်ဖြစ်ပါတယ်
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် Dedirten ခဲ့ulaşımparkကားမောင်းသမားသေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်
ulaşımpark Helal Olsun ဘတ်စ်ကားမောင်းသူ Dedirten အပြုအမူ
drivers ထောက်ခံမှု Mota မှာတွေ့ရှိကြသည်အဓိကရုဏ်းသွားရောက်ကြည့်ရှု
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Qualifications Framework ကိုအပေါ် Metrobus ကားမောင်းသူမှတ်ချက်နှင့်အကြံပေးချက်များမှဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
ခံတွင်းဌာနမှူး Start ကိုရဲ့အလှူငှမြေားနှင့်အတူ Adana အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်းသင်တန်း